Fanjonoana farihy maloto :: Nogadraina ny lehilahy roa naka trondro tetsy Masay • AoRaha
Tra-tehaka, omaly maraina, ny lehilahy roa maka sy mivarotra trondro maloto avy ao amin’ny farihin’i Masay. Navantana any am-ponja izy ireo, eo am-piandrasana ny fotoam-pitsarana. Niaiky ireto lehilahy roa voasambotra, tamin’ny fakàna am-bavany azy ireo, fa mivarotra trondro nalaina avy tao amin’ny rano maloto eny Masay.
“Nahazo fitarainana ny polisy miasa eny Ambohimanarina fa misy andian’olona lahy sy vavy manarato trondro maloto ao amin’ny farihin’i Masay sy Anosy ary Behoririka ka mivarotra izany eny amin’ny tsenan’Ambohimanarina sy Talatamaty, Ambohibao ary Ivato. Isa-maraina manomboka amin’ny efatra hatramin’ny dimy ora no anaovan’izy ireo izany”, hoy ny polisy.
Nosakanana sy nosavaina ny taksibe voatondro ho mitondra an’ireo mpaka trondro maloto ireo. Tratra tao anaty taksibe iray ny lehilahy roa nitondra trondro 15 kilao niaraka amin’ny fitaovana fanaratoana. Fantatra fa vao avy nojonoina teny amin’ny ranon’i Masay ireo hazan-drano ireo.
Ambodin’Isotry :: Dimy lahy nirongo basy nanafika fivarotana
Razana teny Anosibe :: Lehilahy roa hita faty teo an-tsisin-dalana